musha United Kingdom Vatambi Emma Watson Nyaya Yeucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, anotumidzwa zita "Em". Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheEmma Watson Childhood Nhau, Biography, Chokwadi Chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Upenyu hweMunhu, Mararamiro uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake kusvika paakava nemukurumbira.
Ehe, munhu wese anoziva nezvekuita kwake kwakanaka achitamba nyeredzi senge Hermione Granger mune iyo Harry Potter akateedzana. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Emma Watson's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Emma Watson Nyaya Dzekubereka Mwana:
Emma charlotte duerre watson akazvarwa pazuva re15th raApril 1990 kuna amai vake, Jacqueline Luesby uye baba, Chris Watson muguta reParis, France. Mutambi weChirungu, modhi uye muratidziri akazvarwa seyekutanga pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Vabereki vaEmma Watson vese vari vaviri vakadzidziswa uye vanoita magweta muMaisons-Laffitte, Paris.
Vabereki vaEmma Watson, Jacqueline Luesby naChris Watson.
Emma mudiki akapedza makore mashanu ekutanga ehujaya hwake muParis, France, kwaakakurira nemunun'una wake, Alex. Alex Watson akazvarwa 15 Zvita 1992.
Emma Watson Mhuri Yemhuri:
Kunyangwe mukurumbira wechiRungu akaberekerwa muFrance, kutarisa mumadzitateguru ake kunoratidza kuti iye ndewenyika yeBritain ine dzinza rakasanganiswa kusanganisira chiRungu, chiGerman, Welsh, neScotland midzi yemhuri. Sekutsvagisa kuchiisa, mhuri yaEmma Watson yakashanda yemhuri yepamusoro-soro.
Hupenyu hwepakutanga hwaEmma Watson (Chokwadi Chisingatsungiririki):
Peharbs iwe wausingazive,… Chikamu chisingakanganwiki cheEmma Watson Yevacheche Nyaya ine chekuita nezviitiko zvisingatarisirwi zvehudiki hwake, imwe yakatanga aine makore mashanu. Waizviziva?… Hukama hwevabereki vake hwakagara kwenguva ingangoita makore manomwe hwakapera nekuda kwekurambana kwavo.
Kutevera kurambana kwevabereki vaEmma Watson, musikana murombo akabva France kuenda kuEngland kwaaigara naamai vake kuOxfordshire. Kare kumashure, aizove achiveza nguva yekupedza vhiki nevhiki nababa vake muLondon. Kujairirana nemararamiro ake matsva kwaive kwakaoma sezvo zvaive zvakamunonokera kwaari kuti adzidze nezveshoko KURAMBANA rega ndingo sangana nedambudziko rese.
Kuenderera mberi mushure meVabereki Kurambana:
Watson akasimba-akakwanisa kukurira kuvhunduka kwekuparadzaniswa kwevabereki vake uye akafunga kuti ave mutambi pazera remakore matanhatu. Akanyoreswa kunodzidza panguva iyoyo paanenge achienda kuchikoro chenguva-chenguva yemitambo -Stagecoach Theatre Arts - kwaakadzidza kuimba, kutamba, uye kuita.
KuStagecoach Theatre Arts, Watson akarima matarenda ake ekutamba uye akawana mukwikwidzi wenhetembo yekudzokorora James Reeves "Gungwa" pazera ramakore 7. Akaenderera mberi achishandisa tarenda rake mukutamba pamwe nekutamba uye panguva yaakange ave nemakore gumi, akange ave kuita muStagecoach zvigadzirwa zvinosanganisira Arthur: Makore Ediki uye Muchinda Anofara.
Iyo brainiac muHarry Potter yakatevedzana yakaratidza huwandu hwakanyanya hwerunako mukutevera kwake kudzidza. Sezvaakaratidza mudzidzi akangwara kwazvo mune dzakateedzana, anosimbisazve huchenjeri hwake muchokwadi. MunaJune 2006, Watson akatora bvunzo dzechikoro cheGCSE muzvidzidzo gumi uye akawana mamirisere A * nemaviri maA.
Hupenyu hwepakutanga hwaEmma Watson Hupenyu:
Munguva yezvidzidzo zvake zvenguva-pfupi kuStagecoach Theatre Arts, vadzidzisi vaWatson vakamukurudzira kune vamiririri vaida kukanda bhaisikopo rinouya - Harry Potter - akashandurwa kubva mubhuku raJK Rowling raitengesa zvakanyanya Waizviziva here?… Watson akaongorora zvakapetwa kaviri nekuda kwebasa raHermione Granger, iro basa raizomupfuudzira mumukurumbira we nyika.
Kutanga Kudya Kwekuita:
Mushure memasere auditions ekutanga chikamu chedungwe - Harry Potter - Watson akaziviswa nemugadziri David Heyman kuti akange akandirwa chinzvimbo chaHermione Granger padivi pemumwe waaikumbira; Daniel Radcliffe naRupert Grint avo vakakandwawo saHarry Potter naRon Weasley zvichiteerana.
Watson aisava mukurumbira pakuita chete asiwo ane mhando yakawanda yetarenda. Akatanga kuita modelling mugore ra2005 aine photoshoot yeTeen Vogue uye akazova munhu wekupedzisira mudiki kuzivikanwa pabutiro. Iye anogara akatara zvinyorwa zvakapfeka- zvakanakisa uye akange ataura kuda kwake mafashoni. Akamboti:
“Ndinoda fashoni. Ndinofunga zvakakosha nekuti ndiwo maratidziro aunoita iwe kunyika ”.
Mugore ra2001, Harry Potter neRuzivo Philosopher akaburitswa. Iyo bhaisikopo yakawana kutarisisa kwakanyanya kuputsa marekodhi ekuvhura-zuva uye kuvhura-kupera kwevhiki pamwe nefirimu repamusoro-soro regore. Iwo matatu anotungamira mabasa akarumbidzwawo nekuda kwemitambo yavo inoshamisa, nekudaro Watson uyo akakwenenzverwa seimwe yevatatu vatungamiriri mabasa akagamuchirwa zvakanyanya nekuda kweanoshamisa hunyanzvi hwekuita mufirimu.
Emma Watson's Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Sezvo kugadzirwa kweakatevera akateedzana emufirimu kwakaramba kuchienderera, saizvozvowo mukurumbira waEmma Watson wakawedzera. Nekudaro, mukurumbira wake wakauya nemutengo - akatora gore gap mushure mekusiya chikoro chepamusoro kutora chikamu muchikamu chechinomwe cheiyo Harry Potter akateedzana. Watson akadzorawo masemita maviri kukoreji kuitira kuti aise pfungwa pabasa rake rekuita nekudaro achipedza kosi yemakore mana mumakore mashanu uye apedza kudzidza kuBrown University aine degree reBachelor muChirungu Zvinyorwa musi wa25 Chivabvu 2014.
Emma Watson's Biography- Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Harry Potter yakave budiriro yekusimuka kwaWatson mukurumbira muindasitiri yemamuvhi. Akatorawo mamwe mafirimu akati wandei anosanganisira; Bellet Shoes (2007), Humwe Husiku Chete, Iyo Bling Ring uye Noa kutaura mashoma. Kubva pakutanga kwebasa rake rekuita, anga achigara achirondedzerwa semutambi anomupa kuda kwechinzvimbo chaanoratidzira.
Nekukurumidza kumberi kwenguva ino (Kukadzi 2020) yekunyora Emma Watson's Biography, iye ave mumwe weanonyanya kufarirwa echirungu echikadzi vatambi muindasitiri yemamuvhi. Wanga uchizviziva here?… Watson akatumidzwa zita rekuti mukadzi anotambira mari yepamusoro kuHollywood muna Kukadzi 2010 mushure mekuwana mari inofungidzirwa pamamiriyoni gumi nemapfumbamwe emamiriyoni muna19. Watson akahwina mibairo yakawanda nekuda kwekuita kwake kwakanakisa muindasitiri yemamuvhi kutanga muna 2009. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Emma Watson mukomana wepi?
Ane tarenda mutambi chiitiko ave achibatanidzwa mune hukama hwehukama kubva pakumuka kwake mukurumbira. Waizviziva here?… Watson akambonyora kwete pasi pegumi nenhatu varume panguva yekunyora iyi bio. Asingatendeki sezvingaite senge zvinonzwika, Watson anga ari muhukama hwehukama ne; Tom Ducker (2006-2007), Angus Willoughby (2007-2008), Francis Boulle (2008), Jay Barrymore (2008-2009), Rafael Cebrián (2009-2010), George Craig (2010), Johnny Simmons (2011), Will Adamowicz (2011-2013), Matthew Janney (2014), William (2015-2017), Chord Overstreet (2018-2019) uye Brendan Wallace (2018-2019).
Mutambi wetsiva uyu zvakare akarumwa kuti ataure Tom Felton aive mubati wake wechiitiko anozivikanwa nekuda kwehunhu hwaDraco Malfoy mumutambo weHarry Potter. Watson anofungidzirwa kuti akange aine chipwanya paari vachiri vadiki. Kuda kwake Tom kungave kwakatongwa munguva ichangopfuura kungangotungamira kuukama hwake naye muna2019.
Hukama hwaWatson hwakatonyanya kushamisa uye kufadza nekuda kwekuti mutambi anoremekedzwa, akapfuura nemuhukama hwehukama hwataurwa pamusoro apa achiri asina kuroora panguva yekunyora iyi bio. Hukama hwake hauna kutungamira mukuzvarwa kwevamwe vana, zvisinei, inguva chete ndiyo ichataura kana achishuva amai chero mwana mune ramangwana.
Emma Watson's Mhuri Chokwadi:
Mukana iwe waisaziva, Emma Watson Mhuri yakapfuma. Kuzvarwa mumhuri yakapfuma yemhuri, aive nekodzero yekunakidzwa inoshamisa uye yakasarudzika hupenyu hwemhuri. Zvakakodzera kutaurwa, kupatsanurwa kwevabereki vaEmma Watson kwakave musimboti wekushungurudzika uye kushungurudzika mumhuri yake. Muchikamu chino, isu tinopa kwauri zvimwe zvakawanda nezve nhengo dzemhuri yaEmma Watson kutanga kubva kuna amai vake vakafanana.
Nezve Amai vaEmma Watson:
Jacqueline Luesby amai vaEmma Watson. Iye zvakare gweta senge aimbove murume wake, Chris Watson.
Kugara kwake padivi pemurume wake kwave chimwe chemubhedha zvakaita kuti rudo rwezvidzidzo zvakanyanya muhupenyu hwaEmma Watson. Mushure mekurambana kwake naChris, Jacqueline akaedza zvakawandisa kuti atsigire vana vake chete, Emma naAlex.
Nezve Baba vaEmma Watson:
Chris Watson ndibaba vaEmma Watson. Iye gweta uye akange akaroora amai vaWatson, Jacqueline kweanenge makore manomwe.
Kuroora kwake kuna Jacqueline kwakapa kuberekwa kwevana vaviri vane tarenda - Emma nemunun'una wake, Alex. Chris nemukadzi wake vakapfuura nemuyedzo wekurambana izvo zvakaita kuti aende zvakare kumusha kwake - England. Akaburitsa pachena kuti anga achigara achidada nekubudirira kwemwanasikana wake kunyanya paakabata chinzvimbo chakakura mumutambo weHarry Potter. Chris akavhura account yemwanasikana wake ndokuchengetedza ese mafambisirwo emari aakawana achiri mudiki. Pagore rake rekuzvarwa re21st, Emma Watson akawana kodzero yakazara yekuwana mari yese yaive yachengetwa nababa vake kwaari inosvika madhora makumi matatu nemaviri emadhora.
Nezve Emma Watson's Siblings:
Pamwe chete, vabereki vaEmma Watson vakazvara vana vashanu. Iwo mufaro wekuve nevakoma vazhinji hauna kunzvenga matarenda echirungu mutambi sezvo iye aine munin'ina uye vatatu hafu-vadiki vanin'ina. Munun'una wake akazara - Alex - akazvarwa makore matatu kurambana kwababa naamai vake kusati kurambana. Pakurambana, baba vaWatson vakaroora kechipiri kuna Julie ndokubereka vamwe vana vatatu vanoti; Toby, Lucy, naNina. Munin'ina waWatson wehafu-munin'ina uye hanzvadzi mbiri-hanzvadzi - Toby, Lucy, naNina - vakamutsigira paHarry Potter kuratidzwa muna 5.
Nezve hama dzaEmma Watson:
Achienderera mberi kumadzitateguru aEmma Watson, mbuya vake amai ndiGreta M. Dickinson mwanasikana waJohn George Dickinson naWinifred Jane Bonsor apo sekuru vake amai vaColin Luesby mwanakomana waHorace Luesby naEdith Speck. Vanasekuru vababa vake ndiPhillip James Watson naFreda E. Duerre. Kungofanana nevamwe vazhinji vanozivikanwa, Watson haataure chero kuna babamunini vake kana vanatete uye pachine rumwe ruzivo nezve vazukuru vake nasekuru.
Hupenyu Hwemunhu hwaEmma Watson:
Chii chinoita kuti Emma Watson abike?…
Gara kumashure apo isu tichikupa iwe ruzivo nezve hupenyu hwega hweiye Engish mutambi kunze kweyeye imba yemukurumbira. Kutanga, Watson's Persona isanganiswa yeAries zodiac maitiro.
Kurambana kwevabereki vaEmma Watson zvirokwazvo kwakamupa simba rekuti abudirire muhupenyu. Mutori wenhau, modhi uye muratidziri ane hungwaru hwakanyanya uye akadzidza kunyatsofunga kuburikidza nemhedzisiro yesarudzo dzake asati azviita.
Zvichida, zvaizokunakidza iwe kuti uzive kuti anoremekedzwa mugadziri wemuvhi anoda kutamba Tennis, Netball uye Field Hockey. Zvese zvaari kuita uye zvaanofarira zvinosanganisira; Kupenda, Kuimba, Kutamba, uye Kubheka.
Emma Watson's Lifestyle:
Seye anobudirira muvhi yemuvhi uye mutambi wemuenzaniso, Watson akawana tonne yakawanda yehupfumi. Iye ane mari yakatarwa inosvika zviuru mazana masere emadhora, nekuda kwebasa rake rekuita. Kuongororwa kwenzira yake yekushandisa mari kunoratidza kuti mutambi wechikamu anoshandisa hupfumi hwake mukurarama hupenyu hwakasununguka uye hwakanaka.
Hupfumi hukuru hweWatson hwakamurumbidza nemukana wekuwana pfuma yakasarudzika kusanganisira nengoro dzemotokari. Ehe, anga achionekwa kuseri kwemavhiri emota dzemhando yepamusoro dzinonzi; Prius, an Audi S3 uye Cadillac Escalade.
Zvakare, Emma ane imba yakanaka yekudyara iyo inofungidzirwa kunge yakakosha mari inosvika kumamiriyoni gumi nemashanu emadhora kuNew York.
Chokwadi chaEmma Watson:
Muchikamu chino cheEmma Watson's Biography, isu tinopa kwamuri zvimwe zvisinga zivikanwe chokwadi isu tisati tambotaura nezvazvo.
Chokwadi # 1: Chii chinonzi Chitendero chaEmma Watson:
Kuonekwa kwaWatson mumuvhi “Noa” yakamutsa mibvunzo yakawanda pamusoro pechitendero chake chechitendero nevateveri vake. Mumhinduro kumubvunzo unouya, Watson akazvirondedzera seMweya WeMamwese (zvinoreva pfungwa yekuti munhu wese achaponeswa nenzira yekunamata kana yemweya). Mubvunzo chaiwo ndewokuti, Vabereki vaEmma Watson vakamurera kuti ave mumweya wezveMweya here?
Chokwadi chechokwadi # 2: Kuda Kwake Imhuka:
Emma Watson anoda kitsi uye anozvichengeta sechavo chipfuyo. Iye ane kitsi mbiri dzaakatumidza kuti Bubbles uye Domino. Haanyari kuratidza-kubva kune mhuka dzaanogara kana asingawanzotora katsi yake ndokupa mifananidzo yavo neshamwari dzake pasocial media.
Chokwadi # 3: Anosvuta uye Anonwa here?
Nhengo dzemhuri dzaEmma Watson kusanganisira iye haana kuonekwa pachena, achiputa (muhupenyu chaihwo). Anogona kunge achibvuma kutora chinzvimbo chekusvuta mumabhaisikopo, asi izvo hazvireve kuti anoratidzira hunhu hwakafanana muhupenyu hwake chaihwo.
Chokwadi # 4: Emma Watson ane maTatoo nokubaya here?
Emma Watson aifanira kumirira kusvika ave nemakore gumi nemashanu asati abvoorwa nenzeve. Akaonekwa zvakare akapfeka tattoo yenguva pfupi neshoko “Nguva Yakwana” kuma 2018 Oscars. Angangodaro afunga kuchira tattoo isingagumi mune ramangwana rinouya.
Chokwadi # 5: Zvikonzero zvezita rezita raEmma Watson:
Nekuda kwemaitiro ake ekufamba, Watson akatumidzwa zita "Bhegi Mukadzi". Akange aburitsa mubvunzurudzo nevezvenhau kuti haarongedze mwenje pese paanofamba. Aifanira kurongedza mabhegi akawanda ane zvese zvaaida parwendo rwakanaka pamwe chete nenharembozha yake nemabhuku ekuverenga zvakapusa.
Kuputira chokwadi chedu chaEmma Watson Biography chokwadi, heino wiki yake chokwadi chakaunganidzwa.
Zuva uye Nzvimbo yekuzvarwa:
15 April 1990 (makore 29 kubvira waFebruary 2020). Paris, France
Jacqueline Luesby (Amai), naChris Watson (Baba)
Watson, Watson, Toby Watson, Nina Watson
Brown University (BA) uye
Worcester Koreji, Oxford.
1999 kusvika Present
Vatambi, Model uye activist
Harry Potter uye Dombo reMaporofita
1.65m = 5.41ft
VERENGA Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Emma Watson Childhood Story plus Untold Biography Facts. At humwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Childhood Biography Diary- yevakadzi BRITISH ACTRESSES